ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ပရောပရည်လုပ်ခြင်းအနုပညာ
အားဖြင့် nick Boothman
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 25 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ပရောပရည်လုပ်ခြင်းပဲပျော်စရာထက်ပိုပါကအခြေခံအကျဆုံးင်. မျိုးစိတ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်လူ့ connection ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်. ကျနော်တို့ပရောပရည်ရပ်တန့်မယ်ဆိုရင်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲကျ, နှင့်မျိုးပွားမကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားင့်. သို့သော်သဘာဝကျွန်တော်တို့မျိုးသုဉ်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကယ်ဖို့လိုအပ်သမျှလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုသနားတော်မူပြီတောင်မှ, လူတိုင်းသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်သူတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲသိတယ်. ကပရောပရည်လုပ်ခြင်းငှါကြွလာသောအခါဤအထူးသဖြင့်မှန်သည်.
Charlene, ကြီးမားတဲ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသံကြိုးနှင့်အတူမန်နေဂျာ, နှင့်က Kira, တစ်ဦးသူတွေဟာ, အစောပိုင်းလုံလောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အလယ်၌စားပွဲကိုရရှိရန်ရေပန်းစားနိုက်ကလပ်ဂါလာပါဂို့စမှာရောက်ရှိမည်, ဘားမှာများစွာသောအမြင်နှင့်အကအခုန်အထပ်နဲ့. Pretty မကြာမီလူအစုအဝေး၌လှည့်လည်ခြင်းနှင့်ထိုအရပ်ကိုတက်ဖြည့်. သူတို့ကဒီမှာစပ်ဆိုင်တူနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဝတ်ဆင်နှင့်ကြည့်ရှုနေကြသည်. Charlene က Kira မှပြောသွားအဖြစ်, သူမရဲ့ဆံပင်အချို့ကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည်ကြိုးမျှင်နှင့်အတူဧည့်ခန်းနဲ့တယောစစ်ဆေးပြီး. မိနစ်တိုင်းစုံတွဲသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ် wiggles နှင့်, အချိန်, စားပွဲပေါ်သူမပါးဆုံကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်သူမ၏လက်တွင်သူမ၏ဦးခေါင်းကျိန်းဝပ်, ဘားမှာအထီးအလားအလာမှာမျက်စိကို pouting နှင့်အောင်. Charlene သူမကို sexy ဖြစ်ခြင်းရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်, ဒါပေမယ့်သူမကမယ်. သူမသည်လူများ၏အဘယ်အရာကိုအများကြီးလုပ်နေတယ်င်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံး, သူတို့စားနေကြသည်အပေါ်ထွက်ဖြစ်သည့်အခါဘာလုပ်: သူမသည်ချစ်စရာဖြစ်ခြင်းကို sexy ဖြစ်ခြင်းရှုတ်ထွေးစေမယ့်. တကယ်တော့, သူမ၏လုပ်ရပ်များကိုသာသူမ၏လုံခြုံမှုမရှိခြင်းနဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုကြည့်ရှုစေ, နုစွမ်းအင်ကိုချွတ်ပေးခြင်း.
ခန့်မှန်း, သို့သော်ငြားလည်း, ကြိုးစားနေပါကြောင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြည့်ရှု. သူမတိတ်တဆိတ်ထိုင်အချိန်အများစုဟာ, သူမခေါင်းကိုဒါအနည်းငယ်စဉ်အချ, နှင့် Charlene မှဂရုတစိုက်. တခါတရံ, သူမကသူမ၏သောက်စရာ sips အဖြစ်, သူမ၏မျက်စိဖန်ခွက်ရဲ့ထိပ်ကျော်စေ့စေ့ကြည့်ရှုတော်မူမည်သူသည်တဖြည်းဖြည်းခန်း၌ယူရပါလိမ့်မယ်. တကယ်တော့, သင်နီးနီးကပ်ကပ်စောင့်ကြည့်လျှင်, က Kira Charlene ၏ထက်ဝက်အမြန်နှုန်းမှာ operating ခံရဖို့ဟန်. သူမသည်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနဲ့လုံလုံခြုံခြုံနှင့်ဆင်တူပြီးစိုက်ပျိုး-up ကလိင်စွမ်းအင်ကိုချွတ်ပေး.
ယခုက Kira ဟာဗေးပြောက်ခဲ့သည်, သူမမကြာသေးမီကပါတီတစ်ခုမှာကိုငါမြင်၏ဒါပေမယ့်စနစ်တကျတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှယောက်ျားတစ်ယောက်. သူမသည်ဘဟားမားတွင်ရွက်အကြောင်းပြောနေတာသူ့ကို overhear မှညနေမသေချာပါဘူးဖြစ်င့်, သူသည်လည်းဆွဲဆောင်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့သည်ထင်ခဲ့ (က Kira ရွက်ကိုချစ်သောသူ). ယခုမှာဤအရပ်၌လည်းသူကတခြားယောက်ျားတွေရဲ့စုံတွဲတစ်တွဲလက်နှင့်အတူရှိ၏, ဘားဆန့်ကျင်မြှောင်. က Kira သူမ၏ Peripheral ယခင်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ၌သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုသူမဦးတည်လှည့်ရန်အဘို့အမြော်လင့်.
အဖြစ်မကြာမီသူလုပ်နေကျအတိုင်း, က Kira မှသုံးမှတ်, ဆင်ခြေသူကိုယ်တိုင်, စားပွဲကနေထပြီး, နှင့်လှေကားမျက်နှာသို့ saunters လသာဆောင်မှတက်, Harvey နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကအတိတ်ညာ, တင်ပါးပရိယာယ်ယိမ်းနွဲ့, အနည်းငယ်သွားလိုက်ပါ. (အဘယ်ကြောင့်ချဦးခေါင်းကို? ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ brashness ထက် coyness အားဖြင့်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြသည်ဖြစ်ဟန်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။) ထိုအခါက Kira ၏မျက်မှောက်အဆက်အသွယ်၏မြန်မြန်ဆန်ဆန်အခိုက်သူမရဲ့ပစ်မှတ်အပေါ်ကို fix. သူကသူမ၏မြင်သည်. သူမ Harvey သိတယ်ဒုတိယသူမ၏သတိပြုမိခဲ့သည်, သူမ coyly ကွာကြည့်ရှု. သို့သော် Harvey တုံ့ပြန်ရန်အချိန်ခင်, က Kira နောက်တဖန်သူ့ကိုမမှာ glances, သူမ၏မျက်စိကိုပိတ်ဒီအချိန်အစဉ်အဆက်ဒီတော့အနည်းငယ်သူမပြုံး၏စကားရိပ်ကမ်းလှမ်းအဖြစ်. Harvey မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရှိသွားတဲ့.
ဂတိတော်နှင့်ယှဉ်-ရုပ်သိမ်းပေးရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၏အလွန်စိတ်နှလုံးသည်. ဒါဟာ arousal ဖန်တီးရန်အသုံးပြုမယ်.
သင်သည်အဘယ်သို့ပဲကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်သိပ္ပံပညာရှင်များဟာဗေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်က Kira ၏အစိတ်အပိုင်းတခု arousal တုန့်ပြန်ပေါ်ကတိ-ရုပ်သိမ်းပေးရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပဌနာကားအဘယ်သို့. မှန်လှဲဖို့လာတဲ့အခါ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖန်တီးအားလုံးတင်းမာမှုနှင့်လွှတ်ပေးရန်အကြောင်း, သင်ကြောက်စရာရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောနေတာတ​​ော့မည်လား, ကြိတ်စက် Coaster, သို့မဟုတ်လူ့လိင်စိတ်. က Kira ဟာဗေးပေါ်တွင်အသုံးပြုသောဂတိတော်-ရုပ်သိမ်းပေးရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၏အလွန်စိတ်နှလုံးသည်. ဒါဟာ arousal ကိုဖန်တီးရန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကအသုံးပြုမယ့်, နှင့်၎င်း၏မှာ dynamic ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အတိအကျဘာဖြစ်: အာရုံစိုက်, ပြီးတော့သိမ်းယူမှု, တဖန်တင်းမာမှုကြောင့်ပေးခြင်း, လွှတ်ပေး, တင်းမာမှု; မျက်လုံးချင်း, သွားကြည့်ပါ, မျက်လုံးချင်း. တဦးတည်းကိုကြည့်သေချာပေါက်ဘာမှမဆိုလိုပေ, ဒါပေမယ့် Kira ဟာကိုနှိုးဆွလမ်းအတွက် sauntered, Harvey တစ်စက္ကန့်ကိုကြည့်ပေး၏, နှင့်သူမ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူပြုံးပြအနည်းငယ် coyness အကြံပြုချ. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအတိုးတစ်ခုမမှား signal ကိုမှတက်ကထပ်ပြောသည်. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများဒီအခြေခံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုသုံး, အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ saunter သို့မဟုတ်လူတစ်ဦး၏ swagger အပေါ်အခြေခံပြီး, မျက်လုံးချင်းနှင့်တစ်ဦးပြုံးလိုက်ပါ, အခြားသူတစ်ဦးအတွက်အတိုးနှင့်အချက်ပြနှိုးဆွဖို့.
ဒါကြောင့်က Kira tacitly invitation တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အချိန်လေးဟာဗေးတုံ့ပြန်သည်. သူကအတိအလင်းက Kira ကိုအောက်ကအကအခုန်အထပ်မှာဆင်းရှာဖွေနေမြင်တွေ့နိုင်မည့်လသာဆောင်မှလှေကားကိုတက်လာ. သူကမျက်စိ၌သူမ၏ကြည့်, အပြုံးများ, မိမိနှင့်ကိုမိတ်ဆက်. “နောက်ထပ်မသောက်?” Harvey ကမေးတယ်.
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ . . .” က Kira ပြုံးပြတယ်နှင့်ပြန်ကြားချက်, “ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူကိုဒီမှာဖွင့်နှင့်ကျွန်တော်သူမ၏မြှင့်တင်ရေးကိုကျင်းပနေပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတကယ်ပြန်သူမ၏ရသင့်သည်။”
“ကောင်းစွာ,” Harvey ပြန်ကြားချက်, “သင်နှင့်အတူအောင်ပွဲခံရန်ငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်. တကယ်တော့, တစ်ချို့ရှမ်ပိန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါပျော်ရွှင်ဖြစ်ရင့်. ဒါဟာ bubbly ကိုဝယ်ခြင်းငှါတကယ့်ဆင်ခြေဆင်လက်ရှိသည်အမြဲကောင်းပါတယ်။” သူက grins.
က Kira ဟာဗေးသူတို့ကိုပူးပေါင်းလျှင် Charlene သတိရမည်မဟုတ်ကြောင်းသိတော်မူ၏ပေမယ့်, သူမကပြောပါတယ်, “ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလွန်ရက်ရောင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ဦးမိန်းကလေးများကတိထားတော်’ ညဉ့်အချိန်၌ထွက်. သင်သိလား, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတွေအပေါ်ကိုတက်မီလိုက်။” သူမသည်သူမ၏ဦးခေါင်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်, အကျဉ်းချုံးသူ့ကိုမျှော်ရှာဖွေနေ, ထို့နောက်ကွာ glances.
Harvey ကမေးတယ်, “အဘယ်မျှမနက်ဖြန်လောက်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်း, တူညီသောနေရာတစ်နေရာ, သို့မဟုတ်တစ်ချိန်တည်း, ကွဲပြားခြားနားသောနေရာအရပ်, သို့မဟုတ် . . . ?”
က Kira သည်ပြုံးရယ်. “ဝမ်းနည်းပါတယ်, မနက်ဖြန်အခမဲ့မဟုတ်ဘူး. သို့သော်သင်သည်ငါ့အားသင့်နံပါတ်ပေးလျှင်, ငါသည်ငါ၏အချိန်ဇယားကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ငါသည်သင်တို့ကိုမခေါ်ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့တစ်ချိန်ချိန်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်သေချာပါတယ်။”
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်တယ်, က Kira သူမက Harvey နှင့်အတူနည်းနည်းပိုပြီးအချိန်ကုန်လျှင် Charlene ဂရုစိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိတယ်. အလားတူပင်, သူမနောက်ညကအလုပ်ရှုပ်နေမယ့်သူမစီစဉ်ထားခဲ့သည်အားလုံးလြျှောဖြစ်ပါသည်. က Kira လုပ်နေတယ်သည်အဘယ်အရာသူမ၏ပရောပရည်လုပ်ခြင်းမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရှားပါးမှုတက္ကသိုလ်ကအသိအမှတ်ပြုနိယာမကိုအသုံးပြုသည်.
အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်, လူသားတွေသူတို့ရှိသည်မဟုတ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပိုပြီးလိုချင်တယ်, ဒါကြောင့်ပရောပရည်အခါသင့်အလိုဆန္ဒများကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းရှားပါးမှု၏နိယာမကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်. အိုင်ဒီယာသင်ရေပန်းစားနှင့်ဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ပေးရန်ဖြစ်သည်.
ဟုတ်ကဲ့, လူထု (ပင်ကုမ္ပဏီများကို) ဒီ ploy ရှိသမျှတို့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုငါတို့သည်အဘို့အပြုတ်ကျရပ်တန့်ဘယ်တော့မှဒါကြောင့်ထူးခြားသောမွေးရာပါဖြစ်တယ်. ဥပမာအားဖြင့်, လူတိုင်းကအကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲမယ်သိတယ်, အားလုံးကျောက်ပြားကယ့်ကိုတက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်မယ်. အလားတူပင်, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာသူတို့ရဲ့လိုင်းများကိုရောင်းချကြသည်အဘယ်အရပ် ပတ်သက်. အလွန်အထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်, နှင့်သူတို့၏မြင့်စျေးနှုန်း tags များအများဆုံးပါတီမှထုတ်ပယ်ပစ်ရန်ဝယ်လက်အစေခံ. လာတဲ့အခါရေဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြား, နှင့်ပုံနှိပ်ကြော်ငြာရှင်နဲ့တူထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတရစပ် “အထောက်အပံ့များနောက်ဆုံးနေစဉ်,” “ဖောက်သည်နှုန်းကန့်သတ်နှစ်ခု,” “အရေအတွက်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေခြင်း,” နှင့် “တနင်္ဂနွေသာမှီတိုင်အောင်ကောင်း ပူဇော်.,” သူတို့ရှားပါးမှု၏နိယာမအလုပ်လုပ်နေပါတယ်.
ယင်းကိုမည်သို့မူအရအကူအညီ၏အားသာချက်ယူပြီးလိမ့်မယ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်စေ? သင့်ရဲ့ upping by “အဘိုး” ဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သာ, သင်ရှားပါးသောပုံပေါက်အောင်, အဘိုးထိုက်သော, နှင့်လိုက်ရှာရကျိုးနပ်.